China CNC токခုံစက်များမွေ့ယာထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Dongguan FUYA METAL & Plastic Products Co. , Ltd.
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > CNC စက် > CNC ခုံစက် > CNC ခုံစက်
CNC ခုံ၏စက်သည်တိကျသောဟာ့ဒ်ဝဲအစိတ်အပိုင်းများကိုအဆင့်မြင့်နည်းပညာမြင့်စက်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းအမျိုးအစားများကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည် ၃၁၆၊ ၃၀၄ သံမဏိ၊ ကာဗွန်သံမဏိ၊ အလွိုင်းသံမဏိ၊ အလူမီနီယမ်အလွိုင်း၊ သွပ်အလွိုင်း၊ တိုက်တေနီယမ်၊ ကြေးနီ၊ သံ၊ ပလပ်စတစ်၊ acrylic၊ ရှုပ်ထွေးသောဖွဲ့စည်းပုံအစိတ်အပိုင်းများ၏စတုရန်း, ပတ်ပတ်လည်ပေါင်းစပ်။
CNC ခုံစက် isakind of high-tech machining of precision hardware parts. Can process various types of material, there are 316, 304 stainless steel, carbon steel, alloy steel, alloy aluminum, zinc alloy, titanium alloy, copper, iron, plastic, acrylic, POM, UHWM and other raw materials, can be processed into square, round combination of complex structure parts. Withavariety of high precision, large, medium - batch machine parts processing, precision parts processing features. Product precision is up to 0.002mm,
1. CNC ခုံစက် is an effective way to solve the problems of various, small batch, complex shape and high precision of aerospace parts and realize efficient and automatic machining.
၂။ ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်များသည်စက်ပစ္စည်းများ၊ အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများ၊ ဆီမီးကွန်ဒတ်တာ၊ ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာများ၊ မှိုများ၊ အလိုအလျောက်အထူးထုတ်လုပ်သည့်စက်ကိရိယာများနှင့်အခြားနယ်ပယ်များဖြစ်သည်။ မြင့်မားသောတိကျမှု၊ အကြီးစား၊ အလတ်စား - အသုတ်ပြုစက်အစိတ်အပိုင်းများကိုပြုပြင်ခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းတိကျမှုသည် 0.002mm အထိ ISO, ASME, DIN, JIS နှင့်အခြားအရည်အသွေးစနစ်များနှင့်အညီဖြစ်သည်။
၃။ အစိတ်အပိုင်းများကိုပြုပြင်ခြင်းသည်အလုပ်သမားကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုပိုမိုထိရောက်စွာလုပ်နိုင်သည်၊ ထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်။ အစိတ်အပိုင်းများကိုပြုပြင်ခြင်းသည်လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေနိုင်သည်၊ အလုပ်သမားအင်အားကိုလျှော့ချနိုင်သည်၊ ထို့အပြင်အစိတ်အပိုင်းများပြုပြင်ခြင်းသည်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်သားများ၊ အလုပ်ရုံareaရိယာကိုလျှော့ချနိုင်သည်၊ ထုတ်လုပ်မှုသံသရာကိုတိုစေနိုင်သည်၊ ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချပြီးစွမ်းအင်ကိုသက်သာစေသည်၊ ထို့ကြောင့်အစိတ်အပိုင်းများပြုပြင်ခြင်းသည်အကျိုးရှိနိုင်သည်။
300W LED လမ်းမီး၏ 4.Product အသေးစိတ်
၅။ ပစ္စည်းကိရိယာများ - ကြီးမားသော gantry CNC (2500 * 1800) အစုံ; အကြီးစား CNC (1600 * 900); CNC (800 * 500, အချင်း 300) ထက်ပိုသော ၀ င်ရိုးကြိုးချိတ်ဆက်မှုထက်ပိုသည်။ မြန်နှုန်းမြင့် CNC (၆၀၀ * ၄၀၀)၊ ထက်ပိုသော 850CNC (800 * 500); 650CNC (600 * 500); သာမန်ခုံများ၊ သာမန်ကြိတ်စက်များ၊ လက်ဖြင့်လည်ပတ်သောလေကြိတ်စက်၊ linear ဖြတ်စက်ခြင်း၊ အမှတ်အသားစက်များစသည့်အရန်စက်ကိရိယာ ၁၀၀ နီးပါးခန့်ရှိသည်။
6. စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတိကျမှန်ကန်မှု: 0.01 ± 0.01mm၊ အပြိုင် = 0.003mm; ဒေါင်လိုက် 0.003 မီလီမီတာလာမယ့်
အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု - တည်ငြိမ်သောကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေး၊ ၀ န်ဆောင်မှုအရည်အသွေးကောင်း၊ ဖောက်သည်ကျေနပ်မှု။
ပစ္စည်းပေးပို့ခြင်းစံ - A၊ ပုံဆွဲခြင်းနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိခြင်း၊ B. ဖောက်သည်များ၏ပုံမှန်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိခြင်း၊ ကို C, ရေကြောင်းစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်တွေ့ဆုံရန်
Hot Tags: CNC токခုံစက်, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းသူများ
လိပ်စာ: အခန်း ၁၀၁၊ အဆောက်အ ဦး ခ၊ အမှတ် ၁၅၊ Huabutang၊ Changan Tang ကျေးရွာ၊ Dongkeng မြို့၊ Dongguan City
silicone မွေ့ယာဆိုတာဘာလဲ မင်းအတွက်မကောင်းဘူးလား2020/10/28
ခရီးသွားလိုအပ်ချက်များ - ပြန်လည်ဆွဲယူနိုင်သောခေါက်ချိတ်များ2020/10/28
ကလေးတစ် ဦး သည်မည်သည့်အရွယ်တွင်ခေါင်းအုံးကိုစတင်အသုံးပြုနိုင်သည်2020/10/27
“ ကလေးကခေါင်းအုံးကိုဘယ်လိုစသုံးရမလဲ။ ” ခေါင်းစဉ်သည်မိဘအုပ်ထိန်းမှုကမ္ဘာတွင်ပူပြင်းသည့်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မိသားစုသည်မနေ့ကဒီကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီးပြည်တွင်းစစ်စတင်ခါနီးပြီ၊ အမေ့ရဲ့ကလေးငယ်ဖြစ်သင့်သည်ဟုအမေ့ရဲ့အပြင်းအထန်ငြင်းခုံသည့်အခါ။ သုံးလအရွယ်တွင်အိပ်ရာနှင့်သူမ၏မိဘအုပ်ထိန်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သူမ၏မှားယွင်းစွာရှုမြင်ချက်ကိုပြင်းထန်စွာဝေဖန်ခဲ့သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ နောက်ဆုံး၊ ကျွန်တော့်အမေကမင်းကိုငါဒီလိုမမွေးခဲ့ဘူးလား။ အပြတ်အသတ်အနိုင်ရခဲ့တယ်။ သင့်အားအမြင်မှန်ကိုအလေးအနက်ရှင်းပြရမည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်ကပ်ရောဂါ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်လူတို့၏ဘဝနှင့်အလုပ်ကိုမလွှဲမရှောင်ပြောင်းလဲလိမ့်မည်။ ပြီးခဲ့သည့်နွေ ဦး ရာသီနွေရာသီပွဲ၌ပင်လူများသည်အိမ်၌ပုန်းနေရလိမ့်မည်။ သို့သော်ဤကပ်ရောဂါ၏ရလဒ်အနေဖြင့်တစ်နိုင်ငံလုံးစည်းလုံးညီညွတ်မှုကိုရရှိခဲ့သည်။ ခဏတာဆရာဝန်နဲ့သူနာပြုဆရာမဘယ်လောက်များများမရပ်နိုင်ဘဲစစ်သားဘယ်လောက်ကျန်ခဲ့သလဲ။ ဒီနှစ်မှာတော့လူတိုင်းရှင်သန်နိုင်ဖို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုအားကိုးခဲ့ကြရတယ်၊
အရွယ်ရောက်သူတစ် ဦး သည်တစ်နေ့လျှင် ၇ နာရီမှ ၉ နာရီခန့်အိပ်သင့်သည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင်ဘဝ၏သုံးပုံတစ်ပုံကိုအိပ်စက်ခြင်းတွင်အသုံးပြုသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူသင်၏သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကျောရိုးသည်အချိန်၏သုံးပုံတစ်ပုံကိုခေါင်းအုံးနှင့်အသုံးပြုသည်။
တရုတ်သည်မျက်နှာဖုံးများကိုပထမဆုံးအသုံးပြုသောနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ရှေးခေတ်တွင်ဖုန်မှုန့်များနှင့်လေထုညစ်ညမ်းမှုကိုကာကွယ်ရန်တရားရုံးမှလူများသည်ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းများကိုပိုးပဝါများဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်။ "Mencius · From Low" မှတ်တမ်း: Xi Zi ဟာမသန့်ရှင်းဘူး။